ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: What driver do you want ? Driver များ
What driver do you want ? Driver များ
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Driver တွေလိုအပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ Driver တွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရရှိစေနိုင်ဖို့ စုစည်းတင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရှေ့ပိုင်းမှာလည်း ကိုမိုးထက်မြင့်က Windows7 အတွက်လိုအပ်သော Driver များ ဆိုပြီးတင်ပေးခဲ့ ပြီးသားပါ။ ကျွန်တော့်စက်မှာဆိုရင် Windows7 တင်ထားတာ CPU ရှေ့မှာရှိတဲ့ Audio ပေါက်လေးတွေက အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AudioDriver လိုနေလို့ပါ။ သာမန်ဆို စက်ဝယ်တုန်းက ပါတဲ့ Motherboard Driver ထဲမှာပါတဲ့ AudioDriverလေး run ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စက်မှာ ခုနလို လုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် Realtalk ဆိုဒ်လေးမှာ သွားပြီး Windows7 အတွက် audio Driver ဒေါင်းပြီးရမ်းလိုက်တာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆို ကျွန်တော့် MontherBoard Driver ထဲမှာပါတဲ့ Audio Driver ကလက်ရှိတင်ထားတဲ့ Window7 အတွက်ကို Support မလုပ်ပေးနိုင်လို့ပါ။ အဲ့လိုအခြေအနေမျိူး မှာဆိုရင် မိမိတင်ထားတဲ့ Windows နဲ့ကိုက်တဲ့ Driver လေးတွေ run ပေးရပါတယ်။ ဒါမှသာ အားလုံးအဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့ အလုပ်လုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ အမျိူးအစားအလိုက် လိုအပ်တဲ့ Driver တွေကို ဒေါင်းပြီး Run ပေးလိုက်ပါ။ လင့်တွေအကုန်လုံး အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Free လဲပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အကုန်လိုက်ဒေါင်းပြီး စမ်းကြည့် run ကြည့်ပြီးပါပြီ။ အကုန်လုံး အဆင်ပြေပါတယ်။ Laptopသမားတွေ အတွက်လည်း အင်မတန်မှ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ Printer၊Scannerတွေ အတွက်လည်း အမျိူးအစားအလိုက် ရှာဖွေကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့Serialနံပါတ် လိုက်လည်းရှာဖွေ နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါစေ။